churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chegumi
Kushungurudzika kunoita maKristu mazhinji kunobva pamaberekerwo atakaitwa.
Hatigutsikane nezvatiri nazvo uye tinenge tichitoda zvakawanda pamusoro paizvozvo.
Inova hondo pakati pehurongwa hwaMwari nehurongwa hwedu.
Kuvimba muna Mwari nekuvimba mukubata kwedu.
Kana tikaronga patsva shoko rekuti CAIN tinowana izwi rekuti (I CAN) ndinozvigona.
Aya tinomati mafungiro aKaini: tinorarama hupenyu hwedu tichitarisa pamusoro pezvinhu zvatinoda isu zvinotifadza uye zvinozadzisa zvido zvedu zvenyama kutanga.
Ndinokwanisa kurarama nekuzvitsvagira zvandinoda kuti ndirarame pachangu.
Chikonzero chekuti ndive ndiri panyika ndechekuti (I can) ndinokwanisa kuzviitira uye kuzadzisa zvido zvangu zvese.
Kubatsira vamwe hakuna kunyanya kukosha kwatiri.
Vana vanozvarwa pakarepo vanodzidza kupfumbata maoko avo chinova chiratidzo chekutora wochengeta.
Kuzvitorera ndicho chinhu chikuru chatinodzidza isu vanhu zvakanyanya.
Kupa ndicho chinhu chinotitorera nguva refu tisati tadzidza kuchiita.
ADAMU akaitwa kubva paguruva renyika. Miviri yedu inobva kuguruva.
Varimi vakazodzidza kuti kana vachida kuwana zvirimwa kubva kuvhu kuti tiwane chikafu chinotiraramisa, tinofanirawo kupa chimwe chinhu kuvhu chakaita sembeu nemufudze.
Unowana mukoho wakakura kukunda zvawaisa pasi.
Ukadyara tsanga imwechete yechibage unowana muguri wese wakazara chibage.
Asi haukwanisi kuti udye tsanga dzose dzinenge dziri pamuguri wechibage.
Unofanira kuchengeta dzimwe tsanga dzacho wodyarazve kuitira kuti ukohwe zvakare.
Chidzidzo chinobva pavhu chakajeka: tinofanira kupawo chimwe chinhu kana tichida kuzowana zvizhinji.
Chidzidzo chimwechete ichi chinobatazve pahupenyu hwedu hwemazuva ose. Kana munhu akatiitira chakanaka, tinobva tafunga kuti tinofanira kumuitirawo chimwe chinhu kana kuti kuitira umwewo munhu kuratidza kutenda kwedu.
Zvakanaka hazvingorambi zvichiitikira kurutivi rumwechete, zvichiuya kwatiri, nguva dzose.
Uhu ndihwo hwaro hwechegumi.
Tinofanira kupa chimwe chinhu kudzosera nekuratidza kutenda kwedu pamusoro pezvatakagamuchira.
Vanhu vakasanangurwa sezvo vari ivo voga rudzi rwakasarudzwa naMwari.
Pakati nepakati peIsraeri panoyerera nerwizi rweJorodhani. Rwizi urwu rwakasarudzika sezvo rwusinganopindi munyanza. Jorodhani rwunoyerera rwuchienda kuchambembe kwegungwa reGarirea rwoyerera rwuchibva rwuchienda nekumaodzanyemba kwaro. Saka zvinoreva kuti gungwa reGarirea rinogamuchira mvura ropawo mvura. Izvi zvinoriita kuti rive nehutano rinowanikwa mvura inonwika uye inogara hove.
Kubva ipapo rwizi rweJorodhani rwunozoyerera rwuchienda nekuchamhembe kwegungwa risingaverengwe (Dead Sea) asi hakuna rwizi rwunoyerera rwuchibuda mugungwa iri. Gungwa risingaverengwe ndiyo nzvimbo yakadzikira zvakanyanya pasi rese saka hakuna mvura inokwanisa kuyerera ichibuda mariri. Mvura inokwanisa kuerera ichienda mariri chete. Saka mvura yese iyi iri kuungana mugungwa iri haina kumwe kwainokwanisa kuenda saka inobva yava nemunyu uye hutachiwana yakawandisa. Haukwanisi kunwa mvura iyoyo uye haina hove dzinorarama mairi.
Saka chidzidzo chatawana apa ndechekuti mvura inofanira kuyerera ichipinda uye ichibuda kuti igare yakachena isina kuora mairi.
Hazvidi kuti pangove nekuyerera kwerutivi rumwechete chete, rwekugamuchira.
Gungwa risingaverengwi rakafa? Nei? Nekuti rinogamuchira harikwanisi kupawo.
MABASA AVAPOSTORA 20:35 Pazvinhu zvose ndakakuratidzai, kuti muchibata muchidai munofanira kubatsira vasine simba, nokurangarira mashoko aShe Jesu, sezvaakataura amene achiti: Kupa kunamaropafadzo kupfuura kugamuchira.
Kana tichirarama panyika tiri varanda kumasimba maviri, Mwari uye hurumende (yaidaidzwa kuti Kesari munguva yaJesu).
Vose vane zvavanotarisira kubva kwatiri.
MATEO 22:17 Zvino tivudzei, munofungeiko? Munhu unotenderwa kuripira Kesari (mutero) here kana kuti kwete?
18 Asi Jesu wakaziva kuipa kwavo, Akati: Munondiidzireiko, imi vanyengeri ?
19 Ndiratidzei mari yomutero. Vakauya kwaari nedenari*.
20 Zvino akati kwavari : mufananidzo uyu norunyoro urwu ndezvani?
21 Vakati kwaari zvaKesari. Akati kwavari: Naizvozvo ipai Kesari zvaKesari, naMwari zvaMwari.
Saka Jesu akati tinofanira kubhadhara Kesari, (hurumende) chero mutero wainenge yati inoda.
Kesari chiratidzo chehurumende, anoita kuti tive nemagetsi migwagwa, mwenje yemumigwagwa nhandare dzendege, zvipatara, zvikoro, mapurisa vanachiremba manesi vadzidzisi, dzimba dzinogara nherera nezvimwe zvakadaro.
Tinobatsirika kubva muzvinhu zvese izvi zvatinopiwa asi tinofanirwa kuzvibhadhara nenzira yemutero. Tinobhadhara zvichienderana nemawaniro edu, mutero kubva pamuhoro wedu wepamwedzi.
Tinobhadhara mutero mwedzi wega-wega kubva pamuhoro wedu. Hatikwanise kuramba.
Kubva kuna Mwari tinowana hupenyu, meso anokwanisa kuona, pfungwa dzinokwanisa kufunga, mhepo yatinofema chivimbiso chekuenda kudenga uye chipo chekukwanisa kushanda kuti tirarame. Pasina mhepo yekufema tinofa pasina nguva.
Mwari akabva atipa mukana wekukwanisa kusarudza.
Tinotenda here zvatinopiwa naMwari?
Takazvipira here kupawo chimwe chinhu kwaari? Tingakwanise kudzosera Mwari chipo chaakatipa chekuzvirongera nekuzvisarudzira here?
Munhu akatanga kupa chegumi ndiAbrahama. Izwi rekuti “chegumi” zvinoreva chinhu chechigumi.
Abrahama haana kubvira audzwa kuti ape chegumi. Akazviita kubva pakusarudza kwake ega uye nekuda kwake. Akanga achitenda kuti aive akunda hondo yaakarwa nemadzimambo. Akaona kuti Mwari aive amubatsira kuti varanda vake vaive vashoma vakwanise kuparadza madzimambo aya nemauto avo mazhinji. Aitenda kuti Mwari aive amubatsira akaratidza kugamuchira kwake nekupa chegumi kuna Mwari.
Mwari akubatsira zvakadii kusvikira parinhasi? Unokwanisa kutongera zvese izvi kupfurikidza kutarisa kuti wakadzoserawo zvakadii kuna Mwari.
VAHEBERU 6:20 Pakapinda mutungamiriri nokuda kwedu, iye Jesu, wakatipa muPrisita mukuru nokusingaperi, wegwara reimba yaMerkizedheki.
VAHEBERU 7:1 Nokuti Merkizedheki uyo, mambo weSaremi, muPrisita waMwari Wokumusoro-soro, wakasongana naAbrahama pakudzoka kwake andovuraya madzimambo, akamuropafadza;
2 Abrahama akamupa vo chegumi chezvose; iye pakutanga ari mambo wokururama, kana zvichishandurwa, vuye zve, mambo weSaremi, ndokuti, Mambo worugare.
(Onai, Merkizedheki haana kubvira audza Abrahama kuti ape chegumi.)
Merkizedheki aive ani?
VAHEBERU 7:3 Asinababa asinaamai asinamadzisekuru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kwovupenyu asi wakafananidzwa noMwanakomana waMwari, unogara ari muPirisita nokusingaperi.
Merkizedheki haana kubvira azvarwa uye haana kufa. Aive asina baba panyama. Aive asina amai panyama. Saka Merekizedheki aive Mwari aive azviitira muviri wenyama kubva kuguruva. Zvino Mwari akapinda mumuviri wenyama uyu kuitira kuti asangane naAbrahama semunhu kunge iye. Akazodzokera kudenga kumashure kwaizvozvo muviri wake ukadzokera kuguruva. Asi mumuviri uyu, Mwari haana kubvira ava nekurarama hupenyu kunge hwaAbrahama nokuti haana kutanga semwana akakura kuzova munhu kubva pahuduku kusvika kuva munhu mukuru. Izvi zvaizoitika muTestamente Itsva.
Nemamwe mazwi, Abrahama paakasangana naMerkizedheki, Abrahama akanga achisangana naMwari pachake.
Saka chaakaita chekutanga paakasangana nechiitiko chikuru ichi kwaive kupa chegumi.
Pahuvepo hwaMwari isu vanhu tinofunga zvishoma pamusoro pehupenyu hwedu saka tinokurudzirwa kupa pane kutora.
Kana usingakwanisi kupa chegumi zvinoreva kuti hausati wasangana naMwari mumoyo mako.
Munhu mumwechete chete ndiye anokwanisa kurarama mumweya wako. Zvinoreva kuti iwe kana kuti Mwari. Havakwanisi kugovana.
Kana iwe uchizvitonga mweya wako unenge uchingofunga nezvako chete haukwanisi kupa.
Kana Mwari vachitonga mweya wako zvino unokwanisa kupa nekufungawo nezvevamwe.
Kana Mwari achitonga mweya yedu, tinozvininipisa nekuti hatisi chiro zvichienzaniswa naMwari.
Kuva tinozvininipisa hazvirevi kuti zvishoma zvatinofunga pamusoro pedu, zvinongoreva kuti tinofunga zvishoma pamusoro pedu.
GENESISI 14:17 Ipapo mambo weSodoma wakabuda kunosangana naye pakudzoka kwake pakuuraya Kedhorir-omeri namadzimambo akanga anavo pamupata weShave (ndiwo mupata wamambo).
Abrahama aive auraya madzimambo uye aive akunda kukunda kukuru. Kupa chegumi kuna Mwari kwaive kuratidza kutenda kwake mukurwa kwaaive atenderwa kukunda.
Kupa chegumi chiratidzo chekuti takunda hondo pamusoro penyama uye zvido zedu.
Kana ukauraya zvido zvako, kana ukafa kuzvido zvako womisa kufunga nezvako kuti kutonge mumweya wako, unenge wasununguka kupa chegumi sechiratidzo chekutenda.
Kana usingakwanisi kupa chegumi zvinoreva kuti unenge usati wakunda hondo yekurwisana nezvido zvemoyo wako.
GENESISI 14:18 Merkizedheki, mambo weSaremi akauya nechingwa newaini; iye akanga ari muPrista waMwari wokudenga-denga.
Onai kuti hurongwa hwaMwari hwaive huri hweguva yakareba sei. Mwari akasika muviri wemunhu kuzvisikira iye uye semuPrista mukuru wekuTestamente Yekare aive nemutambo naAbrahama waisanganisa Mwari achipa Abrahama chingwa newaini, pakurangarira kufa kwemadzimambo pamusoro pezvivi zvavo.
MATEO 1:23 Tarira mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanueri, ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari unesu.
Makore angangoite 1900 akazouya Mwari akazozvarwa ari mumuviri wemunhu (Emanueri, Mwari unesu) saka semuPrista mukuru wemuTestamente Itsva, Jesu akaita mutambo nevadzidzi vake paakavapa chingwa newaini pachidyo chehusiku hwekupedzisira, pakurangarira rufu rwake Iye.
I VAKORINTE 11:23 Nekuti ini ndakagamuchira kunaShe icho chandakakupai vo, kuti Ishe Jesu neusiku bwaakapandukirwa, wakatora chingwa;
24 Akati avonga, akachimedura, akati: torai mudye . Ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi; itai izvi muchindirangarira.
25 Saizvozvo vo, vakati vapedza kuraira, akatora mukombe akati: Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu ; itai izvi, nguva dzose kana muchinwa, muchindirangarira.
26 Nokuti nguva dzose, kana muchidya chingwa ichi, kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe, kusikira achiuya.
Zvinosuwisa, tinonyanya kutadziswa nekuda kwekutsungirira kuti tirarame tichibudirira zvenguva pfupi zvekuti hatizowanikwi tiri pakati pehurongwa hukuru hwaMwari.
GENESISI 14:20 Mwari wokudenga-denga ngaakudzwe, wakapa vavengi venyu mumaoko enyu. Akamupa chegumi chezvose.
Abrahama akabvuma kuti akakunda muhondo nekuti Mwari ndivo chete vakanga vamupa kukunda uku. Kwaive kusiri kuda kwehunyanzvi hwake nekuti Abrahama aive asiri murwi akadzidza kurwa.
Abrahama akapa Mwari chegumi chezvose. Kwete chegumi chechikamu chakasara apedza kubhadhara mutero.
GENESISI 14:21 Zvino mambo weSodoma akati kuna Abrahama, ndipe vanhu iwe utore hako fuma.
22 Abrahama akati kuna mambo weSodhomu ndakasimudzira ruoko rwangu kuna JEHOVA, Mwari wokudenga-denga, ndiye muridzi wedenga napasi,
23 Kuti handingatori rushinda kana rukanda rweshangu, kana chinhu chimwe chezvinhu zvenyu, kuti murege kuzoti, ndini ndakafumisa Abhuramu.
24 Ini handidi hangu, asi zvakadyiwa namajaya chete, nomugove wavanhu vakaenda neni, vanaAneri, naEshikori, naMamure, ngavatore mugove wavo.
Abrahama aive asingadi chinhu chekuzvitorera iye, akasarudza kupa nenzira yechegumi pachinzvimbo chekutora chimwe chinhu.
Akakumbira chete chikamu chekupa varume vatatu, mumwechete wavo aive Eshikori.
Mwari akapa Abrahama nyika yechipikirwa Israeri. MaRoma akadzinga maJuda kubva muIsraeri muna 135 AD mushure mehondo ye Bar Kochba, maJuda ekupedzisira akaedza kukunda mauto emaRoma. Mushure maizvozvo maArabhu akatora Palestine. Ndipo pakatanga maJuda kudzokamo gore ra 1900 radarika uye muna 1948 maJuda akadzoserwa chikamu chePalestine senyika uye musha wavo nemubatanidzwa wenyika dzepasi rose asi vakangopiwa hafu yeJerusarema. Vaida Jerusarema nekuti ndiko kwaive kwakavakirwa Temberi naSoromoni. Muna 1967 vakakunda muhondo yakatora mazuva matanhatu vachirwisana nemaArabhu vakazokunda kutora Jerusarema yese, kusanganisira nzvimbo yaive yakavakirwa Temberi naSoromoni.
Pavakatorazve Jerusarema muna 1967, murume aive mutungamiriri wenyika yeIsraeri aive Levi Eshikori.
Saka Eshikori akawana chikamu chake mumazuva aAbrahama uye sechipo kuna Abrahama, nekuti akapa chegumi, Mwari akapawo chikamu kudzosera kuna Levi Eshikori mumazuva edu, anova makore anopotsa kuita 4 000 apfuura. Saka Abrahama kupa kwake chegumi kwaive nemubairo waizouya kumberi pakurarama kwaizoita maJuda vakatevera kumashure kwake. Mwari haafi akakanganwa kuita kwekutenda. Angamirire kupere nguva refu, asi anozokomborera avo vanotenda Mavari.
Mambo weSodoma haana kupa chegumi. Guta reSodoma rakaparadzwa pashure pekubva kwaRoti muguta iri. Nhasi uno vana vechikoro vanofunga kuti Sodoma yakavharwa negungwa risingaverengwe (Dead Sea). Uku ndiko kuparara kweguta rina mambo vasina kupa chegumi. Sodoma rakangonyangarika pachiso chenyika.
Unotevera muenzaniso upi?
MARAKI 3:8 Ko munhu angabira Mwari here? Kunyange zvakadaro munondibira . Asi imi munoti, 'Takakubirai pazvinhu zvipi?' Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa.
9 Makatukwa nokutuka; nokuti munondibira, urwo rudzi urwu rwose.
Kusapa chegumi chaisava chinhu chakanaka kana takazvitarisa panzira yaMwari.
10 Uyai nezvegumi zvose muimba yekuvigira, kuti zvekudya zvivepo mumba mangu, mundiidze naizvozvi zvino ndizvo zvinotaura JEHOVA wehondo muone kana ndisingakuzaruriyi mahwindo okudenga, ndikakudururirai mukomborero wamuchashaiwa pokuisa.
Kupa chegumi kune chivimbiso chinofambirana nako. Izvi zvinonakira kurutivi rwedu.
RUKA 18:11 MuFarise akandomira, akanyengetera kudai, achizvireva akati : Ndinokutendai Mwari, kuti handina kufanana nevamwe vanhu, makororo, vasakarurama, mhombwe, kana nomuteresi.
12 Ndinozvinyima chokudya kaviri , nevhiki, ndinopa chegumi chezvose zvandinazvo.
Kutsanya nekupa chegumi zvaive zvinhu zvakanaka Jesu haana kuzvimhura. Chaakamhura kuita kwake kwekuzviita mutsvene. Saka Jesu haamhuri vanhu kana vachipa chegumi. Akazitaura semaitiro akanaka , sekutsanya. Asi kuita zvakanaka hakufaniri kutiita kuti tizvione setiri nani pane vamwe vanhu. Tiri vatadzi vakadzikinurwa nenyasha. Hatisi nani kupinda vamwe vanhu, tingori nani kana tichibatira Mwari.
I VAKORINTE 16:1 Zvino, kana zviri zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene, sezvandakaraira kereke dzeGaratia, itai nemi vo, seizvozvo.
2 Nomusi wokutanga wevhiki, mumwe nemumwe ngaakamure zvimwe kumba kwake, avunganidze, paakawana napo, kuti zvipo zvirege kuvunganidzwa kana ndichisvika.
Zuva reSondo iri rakabva rava rakakosha zvakare nekuti Jesu akamuka kuvakafa musi weSvondo uye Mweya Mutsvene wakadururwa pakereke musi weSvondo, raive zuva rePentecosti. (Chechi ndiwo muviri wevatendi, kwete chivakwa chavanonamata vari .) Pavaiungana paungano yemusi weSvondo, ndipo pavaiwana mukana wekupa vachidzosera kuna Mwari. Anoda kuti tipe maererano nekusimudzirwa kwatinoitwa naMwari pachikamu chemabasa uye kuti tinenge tiine hutano hunotitendera kubata mabasa emaoko kuti tirarame.
Kushaiwa chaunopa zvinoreva kuti Mwari haana kukukomborera nechero nzirawo zvayo. Saka pakadai panenge paine dambudziko pakutaurirana pakati pako naMwari raunofanira kugadzirisa. Kutadza kunogara kuri kurutivi rwedu, kwete rwaMwari.
Zvatinopa kuna Mwari kupupura kwedu kuti Mwari atiitira zvakadii muhupenyu hwedu.
Kana asina chaati atiitira, zvinoreva kuti zvichida Mwari hatimuzivi.
Zvino tinofanira kushandura nzira dzemafungiro edu totanga kukura pakutenda munaMwari nemuShoko rake.
Madzimambo eRoma, achitanga naNero kumakore akapoteredza 64 AD paakapisa Roma akapomera maKristu, akauraya maKristu 3 miriyoni hushe hweRoma husati hwaparara muna 476 AD.
MaKristu aisvika 68 miriyoni akauraiwa nekereke yeRoman Catholic munguva Yerima (Dark Ages) uye muMiddle ages zvakazopera muna 1580 AD apo pakazomira kuuraiwa kwevanhu kunotyisa uku. Mamishinari akazotanga kuuraiwa kasingaverengeke pakatanga nguva yemamishinari kunana 1800 AD. Mamiriyoni evarume, vakadzi nevana vakadanwa kuzoripira nehupenyu hwavo kuitira kuti vatende uye vabatire Mwari. Uku kwaive kuzvipira kukuru kupinda kwekuripira nemari.
Takaripira zvakadii kuna Mwari?
VAGARATIA 6:6 Zvino unodzidziswa shoko ngaagovane nounomudzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka.
VAFIRIPI 4:15 Munoziva vo, imi vafiripi, kuti pakutanga kweEvangeri, ndichibva Makedhonia, pakanga pasinekereke imwe yakasongana neni pashoko rokupa nokugamuchira asi imi moga.
16 Nokuti napaTesaronika makanditumira kamwe, norwechipiri zve, pakushaiwa kwangu.
Kutaurirana kunosanganisa kupa nekugamuchira. Avo vanodzidziswa vanofanira kupa avo vakavadzidzisa.
VAHEBERU 13:16 Asi musakanganwe kuita zvakanaka nokugovana; nokuti Mwari unofara nezvibairo zvakadai.
MABASA AVAPOSTORA 11:27 Namazuva iwayo vaporofita vakaburuka vachibva Jerusarema, vakaenda Antiokia.
28 Mumwe wavo ainzi Agabo, akasimuka, ndokuvazivisa noMweya kuti nzara huru ichavapo panyika yose; iyo ichasvika panguva yaKraudio.
29 Ipapo vadzidzi vakatenderana, kuti mumwe nemumwe paaigona napo atume zvingabatsire hama dzigere Judea .
30 Vakaita kudaro, vakazvitumira naBharnabhasi naSauro kuvakuru.
Vatendi vakapa zvipo kuti vabatsire vamwe vatendi.
Vakuru ndivo vaizogovanisa zvipo izvi .
9 Makatukwa nekutuka, nokuti munondibira, urwo rudzi urwu rwose.
10 Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira, kuti zvekudya zvivepo mumba mangu, mundiidze naizvozvo zvino ndizvo zvinotaura JEHOVA wehondo muone kana ndisingakuzaruriyi mahwindo okudenga, ndikakudururirai mukomborero wamuchashaiwa pokuisa.